यस्तो देखियो २१ औँ शताब्दीकै सबै भन्दा लामो चन्द्र ग्रहण (फोटोफिचर), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
यस्तो देखियो २१ औँ शताब्दीकै सबै भन्दा लामो चन्द्र ग्रहण (फोटोफिचर)
डिसी नेपाल , १२ श्रावण २०७५
काठमाडौँ । २१ औँ शताब्दीकै सबै भन्दा लामो चन्द्र ग्रहण शुक्रबार राति नेपालसहित विश्वका विभिन्न ठाउँबाट देखियो।
नेपालमा चद्र ग्रहण शुक्रबार राति १२ बजेर ९ मिनेट देखि प्रारम्भ भएर राति २ बजेर ८ मिनेटमा मध्य भर्इ बिहान ४ बजेर ६ मिनेटमा समाप्त भएको थियो।
२१औं शताब्दीको सबैभन्दा लामो यो खग्रास चन्द्रगहण नेपाल, भारत, एशिया, अस्ट्रेलिया, रुस, युरोप लगायतकेही अफ्रिका र उत्तरी अमेरिका सहित विश्वका अधिकांश ठाउँबाट समेत देख्न सकिएको थियो।
अवलोकनकर्ताले सुरुमा कालो र त्यसपछि १ बजेर १५ मिनेटदेखि दुई बजेर ५८ मिनेटसम्म चन्द्रमालाई तामा रंगमा देखेका थिए। त्यसपछि यो विस्तारै रातो रुपमा देखिएको थियो। चन्द्रमाको यो रुपलाई 'ब्लड मून' पनि भन्ने गरिन्छ।
तस्वीर : बीबीसीबाट